Mai Chibwe VekwaZimuto: Nyaya yokudya pamberi pemurume/mukadzi yanetsa vakawanda
Nyaya yokudya pamberi pemurume/mukadzi yanetsa vakawanda
Ndakambonoona muzukuru wedu vave negore nehafu awanikwa nomuzukuru. Taingoitawo nyaya hedu zvikazohi
"Mbuya ndodawo kubvunza nyaya inondinetsa pamoyo pangu." Ini ndokuti bvunza hako. Zvikahi murume ari kundishungurudza nekuda kundiitisa zvinhu zvandisingazivi. Ini ndokubvunza kuti ndezveiko? Kwahi ndezvamadhimoni.
Kuzoti paya ndafeyafeya wanikwei muzukuru ari kuti mukadzi wake ambosvetawo chombo pakunovata uye adewo kuti murume asvitsewo rurimi pakewo. (Kunanzvana pamberi, kuti murume onanzva bhinzi yomukadzi mukadziwo onanzva nokusveta chombo chaiswa mumuromo) Mukadzi haasi kuzvikwanisa. Iyi inyaya yaitomunetsa chose zvokumushaisa hope achifunga kuti murume ane dhimoni.
Ini ndakabvunzawo kuti sei iwe usingazvidi? Zvikahi kana murimi mbuya mungazvidawo here? Ini ndokumutsanangurira kuti pandakawanikwa ndange ndisingazvidiwo chose asi ndakazoti ndatenga rimwewo bhuku pataikonana nokuti murume aida manheru chete ini ndichidawo makuseni chete, bhuku iri rikatitsanangurira kuti Rhoji haina nguva, chero pawaitira zemo muripo mese muchikwanisa, endai muvatane. Mubhuku rimwero mange mune nyaya yokusvetana pamberi iyi, ini ndokubvunza murume kuti anofungei nayo iye ndokumbotsikatsikawo ndokuzodudza kuti anoda kungohwa kuti zvinodii. Tange tava mugore rechina taroorana pandakamuhwisa kuti zvinodii tabva mushawa, iyevo ndokundihwisa kuti zvinodii.
Muzukuru akabvunza zvaaida kubvunza ini ndokutsanangura zvose zvandaigonawo uye kuti hazvina dhimoni mukati, uye kuti kana hazvisi zvemishonga yechihure. Ndakamuudzazve kuti zviri nani murume awane zvese zvaanokumbira mumba. Kana akafunga kuti haudi kumupa zvikumbiro zvake, haazokukumbiri. Ndakatsanangurazve kuti ibasa rake kuona kuti murume wake awana zvaanoda zvese uye kuti murume aite konifidhenzi yokuti akada chaada anouya kumba kuzochikumbira. Kana uchiramba tanga wafunga kuti uri kurambirei wotsanangurira murume kuti sei usingadi wobva wamuudza kuti uchanofunga nazvo ugozotaurirana naye futi. Nyaya yokuudza murume kuti haudi uye haumbofa wakada haina kunaka. Zvinoita sokuti murume akumbira chinhu chakashata. Hapana chakashata panyaya dzese dzerhoji nomurume wako. Kungotaurirana chete mobvumirana. Kana uchitya kuzviita muudze kuti unotya azive kuti chiri kukutadzisa chii.
Pamwe umbozvizama kamwe chete ugomuudza kuti hauna kunakigwa nazvo, pane kungoramba usingazivi kuti zvinodii. Tangai mageza mese kana usina shuwa iwe gezesa murume chombo, wokwevera ganda kumashure kwechimusoro chechombo, wogeza zvakanaka fungwa yako yoziva kuti haana svina. Kana murume ukamubata chombo chinobva chati twii saka haunetseki kuchigezesa. Kana musina kujaira kugeza mese, muudze kuti uchazama kana ageza. Wobva wamuudza kuti ageze zvakanaka.
Kana murume achinakigwa nazvo, chitodzidza kuzviita nguva nenguva nokuti murume akangofunga kuti mukadzi wake haadi kuita zvaanomukumbira kuita, anopedzisira asisakumbiri. Ndipo paunohwa zvohi murume akaonekwa akamisa mota yake kumaraini ekwanhingi. Kana pane zvaanoda iwe muridzi wake dzidza kumupa uye kana wamupa chawamupa mupe nomoyo wose. Munokwanisa kubvumirana mitemo yacho sokuti munobvumirana kuti zvinongoitwa kana muchitamba asi kana murume oda kudiridzira anoitira kuzasi. Pane nyaya dzinoda kuhwisiswa apa. Kana une murume wako munokisana muchipinzana rurimi mumiromo yenyu. Ukuwo unomwa minyatso yemurume iyewo achomwa pazamu pako munonanzvana zheve, munopinzana mumwe mumuromo, etc. Zvese izvi munoita chero papera maawa akawanda mageza. Hino kana murume achangogeza paya chombo chake chinenge chakachena saka kana uchimusveta rurimi gwake gune maBACTERIA akawandisa, ungazotadza sei kumusveta chombo chisina maBACTERIA awa?
Kusada kusveta inongova MENTAL BLOCK yokuti takakura tichiudzwa kuti usabata uku kune svina. Asi hapana chaungaregera kusveta chombo chomurume wako kana uchiziva kuti haahuri. Kana achihura haufaniri kumurega achikurhoja.
Vakawanda vanonyora vachibvunza kuti vodii, murume anokumbira kuti vasvete chombo ivo havana kumbozviita saka vanotya. Kana murume akukumbira zvoreva kuti ari kuda. Iwe kana wakaroorana naye uchiziva kuti akamboita vamwe vasikana, chizvibvunza kuti akambopiwa chinhu ichi here? Kana akambopiwa, zvoreva kuti anozvida saka chikasira kumupawo. Kana usingazivi kuti zvinoitwa sei, mubvunze akuudze. Nyaya inongovapo ndeyemazino chete. Usarega mazino achibata chombo. Shandisa rurimi kuputira chombo wochipurudzira norurimi uchiwanza nokutapudza puresha yauri kuisa rurimi, ukuwo uchisvitsa paunokwanisa kusvika pakureba kwechombo uchiona kuti haudzipwi.
Musoro wechombo uye pamutsetse uri pasi pechombo ndidzo nzvimbo mbiri dzinoti ukaisa rurimi unotohwa chega chombo chichiti Gwii, Gwii, Gwii, nehasha, kudavira zvauri kuita. Unotohwa chichiwedzera kuoma. Kana ava kuzopinza kuzasi unohwa kuti simba racho rakasiyana nezvemazuva ese. Kukura kwacho kwakasiyana futi. Wotoona kuti wanyatsonyorova.
Kana uri munhu anogarononoka kunyorova hwisisa kuti pakusveta ipapo unowedzerawo kunyorova nokuti zvinonaka kusveta murume, kunaka kuchibva pakuziva kuti chombo chiri kuda zvauri kuchipa. Nyaya yokutamba nechombo nemaoko, mumazamu, rurimi, chii zvacho, inowedzeresa kunyorova zasi nokuda kwekuwedzera kwezemo. Ukazoti uku uri kusveta chombo uku uri kuona Response yemurume, iwe haunonoki kunyorova. Saka kusveta ndeumwe mushonga wavaya vanokomburena kuti kunyorova kunovanetsa.
Kana chombo changova mumuromo hapana zvokuti haugoni kusveta, wega unongohwa rurimi gomiramira pachombo. Kwizira rurimi pamusoro wechombo, ukuwo uchipota uchimwa semhuru iri kumwa mukaka, wopotazve uchimboteverera mutsetse uri pasi pechombo uchiuteverera norurimi kubva zasi kumabhora kusvika kumusoro wechombo wasvika kuno kumusoro worega choti nyangara mumuromo, rurimi godzikazve guchikwizirira musoro neganda rechombo. Kana wakabata murume magaro unohwa achibvundirira nokunakigwa nazvo. Iwewo unohwa kuzasi kuchiti Nyevenyevenyeve kuwedzera kuzvimba. Shandisawo maoko pachombo kwete murumo chete. Bata chombo nokuchipurudzira uku uchisweta. Hapana zvokusvoda, mese hamuna hembhe zvese zvemuviri zviri kuonekwa uku watanga kusveta chombo chitobva waita nomoyo wese agute.
Unokwanisazve kunge uri pamusoro pemurume, wakamutanyanga, wakamufuratira zvokuti chiuno chako chiri pahuro pake iwe wakavata padumbu pake nedumbu uku uri kusveta. Unokwanisa kugonyesa chiuno kuti iye anyatse kuona chitubu chako nebhinzi. Kana achida kusvitsa rurimipo osvitsa, Kana achida kupinza mimwe miviri nokukwizirira oita. Kana ada zvorurimi iwe wochichenjera kumuruma chombo pakunakigwa nezvaairi kuita. Ndiri kukuudza nokuti ndoziva kunaka kwazvo. Iwe pamwe hauzivi saka chenjera.
1 Usasvitsa mazino pachombo
2 Usarega murume achikukoira mumuromo. Unodzipwa
Ukabvunza chembere dzekumusha chaidzo dzinokuudza kuti murume anosvetwa. Hakuna nyika isina vanhu vanosveta chombo kana kukisa chombo chomurume. Unohwa mapenzi achiti ndezvenyika yokuti neyokuti isu kwedu hatizviiti. Ukahwa munhu achidaro ari kuti iye haazviiti mumba make. Musaterera vanhu vakadai. Terera zvinoda murume wako chete uite Kwese kwese kune vanosveta nevasingadi kusveta. Iwewo bheta kuzvisvetera murume wako pane kuti andosvetwa noumwewo mukadzi wekuzhe.
Kana ada kusvetwa ndosveta chero ndichiziva kuti haadiridziri mumuromo. Iyewo haadi kudiridzira mumuromo nokuti kuzokisana tapedza kunozomunetsa. Saka mutemo wedu ndiwoyo. Chombo chinosvetwa kana ada kuti chisvetwe. Nyaya iyi yakatanga nokungobvunzana kuti chii chimwe chaanofunga kuti chingaitwa chaangadawo. Ndokutarisa pa bhuku ratanga tatenga ndokuwana vamwe vakadzi vanosveta. Ndokuyeuka zvandakamboudzwa kumusha nambuya kuti kana murume asingakasiri kumira unokwanisa kusveta. Zvinoshanda pakumisa chombo pamurume anonetseka kumira chombo.
Mukadzi kunanzwa pamberi chinhu chinonaka chosechose kupfuura kupinzwa chombo. Ini ndakakurira pamusha pane mombe. Ndaiona bhuru richitanga rananzwa mukadzi waro pachitubu rozokwira pava paya ndichishaya kuti rinoitirei kudaro. Hakuna chombo chinonaka sorurimi pabhinzi. Murume akakusvitsa rurimi pabhinzi akakwiza norurimi hautori nguva usina kuita Orgasm. Kana une murume uya anokasira kupedza kukudiridzira usati waguta, zama kumuti ambodzika zasi norurimi akupfidzise ozokupinza hake chombo kuti achinakigwawo iye. Kana ari anotora nguva imbomukumbira akupe rurimi. Unoita sewavesegwa moto pamberi. Orgasm yacho inokusiya wakati rukutu sowaniaiwa nechimvuramabwe chaicho. Unoihwa ichisvika nokuzvigumwe zveshoka uko, kwete pamberi chete. Fungwa dzinomborashika panyaya dzoupenyu zvokuti hauzivi kuti uri mupenyu here kana kuti wafa. Unokwanisa kuzviitira weti nokutadza kuzvibata pazviitiko zvomuviri.
Chikuru tanga wageza nesipo wobva warega mvura ichimhanyapo kana une shawa. Kana uri mubhavu shandisa mvura kubvisa sipo yese. Murume haanei nokupinza rurimi muchitubu. Kungoperera kuno kubhinzi kwakangonakawo. Akamboda kukisa bhinzi akada kukwesha bhinzi norurimi, akada kumwa sokuti ari kumwa munyatso wezamu, ndizvozvo. Zvese zvinonaka. Iwe mubatire wakapatsanusa matinji aone pokushanda. Bhinzi kana une zemo inokura kuita semunyatso wezamu. Vamwe vane bhinzi dzakatokura chose asi vashoma. Mhomho yese ine bhinzi inoti yamira inoita 0.5-1.0 cm.
Ndohwa varume vakawanda vachikomburena kuti havadi kusveta bhinzi dzevakadzi vavo. Uku kusahwisisa ANATOMY yomunhukadzi, kufunga kuti pabhinzi pane muto unobudapo. Hapana chinobudapo. Bhinzi inongoti mukadzi aita zemo, yomira sezvinoita chombo asi kungoti idikidiki. Inoonekwa hayo zvokuti murume anokwanisa kusveta sezvaanoita munyatso wezamu.
Ukabhenengura matinji emukadzi wako zvakanaka bhinzi inoonekwa zvakanaka. Zvikuru ukaisa piro pasi pemagaro emukadzi , iye wosimudzira mabvi wobhendesa makumbo pamberi poonekwa. Unoona wega wobatirira musoro wake kuti murume wako asabvapo usina kupedza. Mukadzi haashai misodzi panoita orgasm yacho nokuti zvinonaka kupfuura kunaka kunoita kana achizvibatabata ega panyama idzi kana kupinzwa chombo. (Hakuna musikana anodhonza matinji asingazvibatibati nguva nenguva) musanyebegwa!! Hakuna chombo chinokwanisa kunaka sezvinoita rurimi. Kana wada kuti mukadzi wako aite nhapwa yako yepabonde, dzidza kushandisa rurimi pabhinzi yake. Kuhi mukadzi ibhinzi inove HQ yekunakigwa. Kuhi murume kugona kushanda pabhinzi. Murume ratidzawo INTEREST pabhinzi yomukadzi wako uchitomboitawo nyaya naye pazviri sezvaanoitawo pachombo chako newe.
Ipa bhinzi yake zita kuti zvisakunetsai kutaura nezvayo.
Kusvetana nguva imwe chete:
Pamwe kana zvakakwidza munoda mese kusvetwa motenderedzana kuti murume aise musoro pakati pemakumbo emukadzi achinanzva bhinzi nematinji, mukadziwo ane musoro pakati pemakumbo emurume achimwa chombo nokuchipurudzira. Kana mada izvi, zviri nani mukadzi ange ari pamusoro pemurume akatanyanga muromo wemurume akamufuratira kuti akwanise kusveta chombo. Zviri nani pane kuti murume ange ari pamusoro kuti mukadzi akadzipwa hapana chakaipa chinoitika.
Izvi itai makachenjera nokuti mukadzi anokwanisa kunakigwa zvokukangamwa kuti ane chombo mumuromo uye muromo une mazino. Murumewo anokwanisa kutanga kubudisa urume obva afosa chombo mumuromo memukadzi.
Zviri nani kuchinjana kudyanana asi kana mada kuda kudyanana pamwepo, mukdzi ngaave pamusoro pemurume kuti asazodzipwa nechombo.
Pane asina kuhwisisa here? Ndiri kuti Sveta chombo chomurume wako seuri kusveta chihwitsi, asi usaunza mazino pedo unomukuvadza. Iwewo pakusveta hautani kunyorova, zvoreva kuti uri kunakigwa nazvo iri nyaya yokuti une chombo mukati mako uye chakatomira saka unoziva zvichaitika wapedza kusveta.
Ndotizve, kana usingadi kusveta iye achida kusvetwa, usazotichemera pano kuti murume akabhadhara hure iwe uripo une zvose zvine hure asi usingadi kuzvishandisa. Ini kufunga kwangu murume ngaawane zvose zvaanoda mumba kwete kupota achinotora zvimwe kuzhe uko. Kana hure richisveta murume warisingazivi warisina kutoona achigeza, ko ini ndingatadza wandinoziva andaisira mvura yokugeza ndega here? Kana uchiti pane svina enda umugezese wega. Kwevera ganda rakafukidza musoro wechombo kumashure wogezesa wega. Pakugezesa apapo chinotomira futi wonyatsoona zvokuita.
Ngatisaisigwa SERVICE pavarume vedu nemahure. Tinozvigonera tega. Iyewo musi waanokusvitsa rurimi pabhinzi yako ndiwo musi waunoenda kuChurch kunotenda kupiwa kwawakaita murume uyu.
Sezvauri kuona ndoziva kunaka kwazvo asi ndiri mupenyu, saka hazviurai uye hazvina uroyi mukati. KuChurch yechiTawara vanodzidziswa kuti usaisa ruoko pamberi pako kana pemurume/mukadzi wako. Usananzwa kana kusveta pamberi poumwe. Kana uri muTawara ita zvawakadzidziswa. Isu vamwe tinoti hapana limit pamurume wangu. Ndiri nyama imwe chete naye zvese zvaada ndodawo, Zvandada iye anodawo chero zvisingakuvadzi. Handirambi kubata chombo nokuti ndechanguwo. Asi VeChiTawara vane maVERSE avo ari mubhuku ravo. Redu Bhaibheri rinongoti Usaita upombwe. Pamurume wangu handina upombwe naye. Ndine kunakigwa naye chete.
Totizve kuvarume, Mukadzi wako kana ari uya anoti mukatukana ondoudza shamwarirume yake, Mukuchemachema uku akanyengwa akasvitswa rurimi gweshamwari iyi pabhinzi iwe murume usingazviiti mumba, zvinozokunetsa kuwana mukana wekunakira mukadzi wako zvakafanana nokunaka kunoita rurimi gwemurume.
Hama yange yabvunza mubvunzo:
Ndakapedza kutsanangurira hama iyi izvi zvakamugadzikisa hana ndokusiira nyaya iyi apa. Kana akasara akasveta murume handizivi. Kana akazoda kutaura nezvazvo ndomurega achitaura.
Kana mahure achizviitira varume vechihurehure isu tinofanirawo kuzviitira varume vedu. Nyaya inongozonetsa ndeyokuti kana usina shuwa kuti murume wako haahuri. Ukamusveta iye ambovata nehure vhiki yakapera unokwanisa kuita chigwere chiya chinohi HPV kana zvimwe zvigwere.
Apa tiri kuti dzivirira kuhurai nokupana zvese zvamunoda mumba. Havasi vese vanoda kusvetwa chombo. Vamwe havatombodi kuzvihwa. Havasi vese vanoda rurimi gwemurume pamberi. Saka hatisi kuti swerai muchiita izvi asi kuti kana murume akumbira zvoreva kuti ari kuzvida, iwe muridzi wake chiona kuti apiwa. Chimukurudzirawo kukupa ahwisise kuti kupana kwakafanana. Chiita nomoyo wose. Nyaya dzese dzerhoji dzinoda kuitwa nomoyo wose pese pawagonera.
Kana asina kukumbira hazvirevi kuti haazvidi kana kuti haazvifungi. Zvinokwanisika kuti haazivi kuti okumbira sei. Iwe potawo uchiti pakutamba nechombo nemaoko wombochipawo kisi kana dikidiki, wochidetemba. Pachasvika umwe musi waunokisa kwekanguva kanoita kana two seconds, kuti ahwe kuti zvinonaka. Anokwanisazve kusvoda kukukumbira kuti uwedzere saka iwe unokwanisa kumubvunza kuti zvinonaka here uye anoda uwedzere here? Akati wedzera iwe chiwedzera asi taridza kuti ndiwo musi wako wekutanga. Unozviita kuti asakubvunza kuti wakazvidzidzira kupi. Varume vanofunga kuti mukadzi wese anoita chinhu pakuvatana akachidzidziswa noumwe murume. Havabvumi kuti tinotaurirana zvokuita tiri kutsime, kuhuni, kubasa, etc.
Hwisisazve kuti mukomana asina kukuroora ukagarovata naye musi waanofunga nezvokuroora haafungi iwe. Anongoona sokuti kuhura hakukunetsi. Saka chero ukamu sveta chombo unotokwanisa kumuratidza kuti unoita zvinoitwa nemahure. Anotofamba achiudza shamwari dzake kuti hure rake, iwewe, rinoziva zvinhu. Adaro haazokwanisi kukuroora nokuti shamwai dzake dzese dzinokuzive sehure rake. Kuvata nomurume musati mataurirana nyaya dzokuroorana kunodzikisira machanzi okuti akuroore.
Nyaya dzakadzama pakuvatana dzinoda kuti mudzidze mese mune rukudzo mukati mazvo. Murume anofarira mukadzi anoti muri mese anoratidza unhu pane vanhu, muri mumba anoratidza kuti ndimai vemba, pakunovata anoratidza unyanzvi hwekupa murume zvinogutsa. Chikapa chake chinofadza murume, Ari ACTIVE pakupa murume kwete kungogamuchira wakaoma mutezo sehove yaswera muzuva. Ipapa ndipo pasingambofaniri kuti munhu wekuzhe azive zvinoitika.
Mukadziwo anoda murume ane unhu. Mumba ndibaba vemba, pakunovata chikara chaicho pakuvatana anoti akakumisira chombo anozokusiya wati rukutu waratidzwa kuti murume mumba ndeupi. Unopinzwa wokurungwa sebota zvinotora nguva yakareba, wozoti waguta, wopiwa gusvu reurume. Murume akadai akakumbira kuti usvete chombo chambogezwa haumbononoki kubvuma.
Saka apa ndiri kuti sveta wako wemumba kana zvirizvo zvaanoda. kana asineiwo nazvo ita zvaanoda asi kupotawo uchimbokisa chombo uchichidetemba hazvina kuipa. Murume ngaazive kuti unofarira chombo chake. Vakaita RESEARCH yacho vanoti hakuna murume asingafariri kusvetwa chombo asi kungoti vakawanda vanonokumbira hure kuzviita, iri ngari yokusvoda kukumbira mukadzi wemumba.
Kwahi na EDNAH culture yedu haibvumiri zvokusveta chombo. Ini ndokubvunza kuti Culture yedu inobvumira zvipi. Zvikahi inobvumira kuvata nomurume. Ini ndokubvunza kuti muvete menge muchiiteiko? Kwahi kupinzwa chombo kunobvumigwa asi kuchibata kana kuchisveta hakubvumigwi. Saka variko here vakaonawo GUIDE BOOK yeculture yedu vakaitevera sezvairi?
Culture yedu inoti:
Usabviswa humhandara nomurume asina kukubvisira mombe youmai.
Usavata nomurume/mukadzi asiri wako
Usapfeka dhirezi rinotaridza zvidya zvako zvakashama
Usanika bhurugwa rako parinoonekwa nevemuraini kana nevana vadiki
Usabata UNDERWEAR yomurume asiri wako
Usatendera murume asiri hama yako kuvata pamba pako murume wako asipo uye kana iwe usina murume
Usaita mimba usina kuwanikwa.
Usaramba zvinodiwa nomurume wako.
Ndiani anotevera zvese izvi? Kana aripo ngaasimudze ruoko tione. Hino kana pakahi murume ndiye she wemba yenyu iye ouya kumba oti sveta chombo ichi, iwe uchaita sei? Zveshuwawo vazhinji havadi kuti usvete vanongosvetwa kana vane mahure avo anohi Simoro hausi, zvisimo muCULTURE yedu. Saka iwe hako chigara mumba mako neculture yako tione kwaunosvika. Usafunga kuti zvawaramba murume achaombera maoko oti mukadzi wangu ane CULTURE yedu saka munhu kwaye. Murume anonoswetwa chete, just not by you. Musi waachada chimwe chinhu haakumbiri kwauri. Anoziva kuti unoramba saka anonokumbira kuya kwaakamboswetwa chombo. Iwe gore rinozopera wava nechigwere. Mazvokuda mavanga enyora.
Masvetero echombo: Vakadzi
Pamurume isa chombo chake mumuromo, ugosveta semwana ari kumwa zamu ramai, ukuwo uchiurunga musoro wechombo norurimi uchipota uchiita seuri kudya ICE CREAM CONE. Wozopota uchinanzva mutsetse uri pasi pechombo, uchimutevedza ne TIP yerurimi uchinopedzisa nomusveta musoro wese wechombo. Zvinoda wakabata chombo kuitira kuti murume asakupinza chese mumuromo wakarivara nokuti ungadzipwa.
Kana wada kukoira nomuromo usaisa puresha yakawanda. Kana murume asina kuchekwa, tanga wakwevera ganda kuti musoro wechombo uve pachena. Tevera mutsiba wechombo norurimi futi.
Varume vanonetsa kuti pamwe ari kunakigwa asi haachemereri. Anongoti zii saka unotofanira kupota uchimutarisa kumeso kuti uzive kuti ari kunakigwa here. Potazve uchipurudzira chombo chacho. unotohwa wega mumuromo chichikura nokuomarara, nokugwinha muruoko nomumuromo.
Usarega murume achikukoira mumuromo, nokuti anokwanisa kukudiridziramo. Asi kana wada kuti adaro zviri kwauri. Urume hahuna zvinokodza saka hapana chakaipapo. Kana wajaira kudya chombo unoona zviri NORMAL. Haumiriri kukumbigwa. Unongoti mambokisana, wodzika zasi wotowanika chati twiii nechekare. Ukuwo kana uchida kuti akusvitse rurimi pabhinzi tendeuka umutanyange chifuva iwe uri zasi uchimufadza.
Kusveta chombo kunokuitisa zemo risingaiti. Kubata chombo mumaoko, unotohwa chichikurira mumaoko. Ukangotanga kuchinanzva wega unohwa muviri wako uchidavira kuti paita chombo pano, nokuti unoziva zvichaitika. Kuzasi kunonyorova. Kana wakagwadama mberi kwemurume amire, akakubata achikupurudzira mutsiba nezheve, zvinonaka. Zvinokurerusawo muviri wako kuti uzokasira kuita Orgasm.
Kana ane zichombo zigurusa usazama kuti rikwane rese mumuromo. Ingosveta paunokwanisa ipapo kumwe kwese wonanzva chete nokupurudzira. Varume vanoda kuziva saizi dzavo saka pota uchitaridza kuti ane chombo chikuru.
Mukadzi kana akavhura makumbo, uye akagera vhudzi rese, patsanisa matinji kuno kumusoro kwakananga kuguvhu kusvika waona bhinzi yake. Bhinzi dzakasiyana saizi yadzo. Vamwe vane kadikidiki vamwe voitawo hombe sezvamakangoitawo imi varume. Asi ukabhenengura matinji zvakanaka, chero ane kadiki zvakadii unokaona kakangoita sekabhatani kadiki. Ipapo ndipo pane HEADQUARTERS yokunakigwa kwemukadzi. Pedza nguvapo uone zvinoitika.
Tanga nokuikisa zvinyoronyoro wopota uchikisa uchitsvaira padumbu uchiuya kuno kuguvhu uchidzokerazve zasi uchikorobha bhinzi nomudzi waho norurimi. Nanzva zvakanyorovera kusvika yajaira. Zvadaro ramba uchinanzva kana kuisveta sezvaunoita munyatso wezamu rake. Potazve uchinanzva pakatenderedza bhinzi yacho nokuti panonaka zvokuti. Kana iye ada anokuvhurira matinji, bhinzi yake yoonekwa iwe wongonanzva nokusveta chete, uku wakaisa maoko ako pasi pemagaro ake kuti kana woda kuwedzera puresha ugokwanisa kuwedzera asingatizi. Terera kuchemerera kwake nokuomesa mutezo wemakumbo ake kuti uzive kuti woramba uchiita here. Pamwe anokubatirira musoro kuti usabvapo. Pamwe anosimudzira chiuno kureva kuti wedzera puresha. Pamwe anokubvisapo kureva kuti zvawandisa. pamwe anowedzera kuvhura pane bhinzi kuti inyatse kubuda, Akadaro ramba uripo uye imwa bhinzi semunyatso wezamu nokuti ari kunakigwa nazvo.
Hwisisa kuti mukadzi wako anokwanisa kuva ane kabhinzi kadikidiki asi anongonakigwa zvakafanana nevane mazibhinzi mahombe. Kana washaya kuti iripi muudze akuratidze muridzi. Ongorora zvayakaita yakamira uye zvayakaita isina kumira. Kune vakadzi vakawanda vasina kumboona bhinzi dzavo. Kana une mukadzi akadai mubatire MIRROR aone zvayakaita.
Pane nguva imwe yokuti bhinzi haidi kutambwa nayo. Inenge ine SENSITIVITY yakawandisa. Kana mukadzi aita ORGASM anoita nguva yokuti kana kubatwa bhinzi anenge asingadi. Imboisiya yakadaro wozoti kwapera nguva unokwanisa hako kutangazve. Iyo unoonawo yomira sezvinongoita chombo kana mukadzi atamba nacho.
Veduweeka ngatisanyeberana. Bhinzi inonaka kunanzviwa nomurume. Kana ukaita rombo rakanaka rokuwanikwa nomurume anonanzva bhinzi yako usamuitira kana chinhu chimwe chete chakaipa muupenyu hwako hwese nokuti vamwe vedu vanongoita zvokurota vachiitwa izvi. Kana ukarerusa muviri pakuitwa, ukatsinzinira maziso, ukaterera chete kunakigwa kuri kuitwa muviri wako, haunonoki kuita rino ziORGASM rinoita sekutinhira kwebhazi nechitima nerhori netarakita pamwe chete po. Kana wange uri munhu asina kumbozviitisa ORGASM nemaoko, ukangotanga nokuwana murume anodawo kukunanzva bhinzi, unokwanisa kutombofenda zvokuti iwe wega unofunga kuti wafa. Chombo chomurume aunoziva kuti ane rudo newe chinonaka hacho asi veduweeka, rurimi pabhinzi guri mberi.
Kuyamwa chombo chomurume asina chigwere uye atanga ageza hakuna chigwere. Kana ariuya anoti chombo chake chikangohwa kudziya chotorutsa urume, hwisizve kuti urume chaihwo hauna chigwere futi, uye hahuna ma SIDE EFFECTS. Asi kungoti pamwe hungakusemesa mufungwa dzako. Seni hangu handidi urume mumuromo. Asi chigwere hahuna kana murume wako ari munhu akavimbika.
Bhinzi yomukadzi haina chinbudapo chingakwanisa kuita zvigwere. Kana mukadzi asina maronda pabhinzi zvoreva kuti hapana chinobudapo. Bhinzi inotori nani kuisveta pachombo chomurume nokuti chombo chinosinira kana chatsamwa nezemo.
Kana murume akazodawo hake kundonanzva matinji kana pakati pematinji, anonosangana nekunyorova kwemukadzi kunoitiswa nokugadzirira kupinzwa chombo pakurhojana kwavo. Kunyorova uku hakuna chigwere kana mukadzi agara asina chigwere. Asi futi vamwe varume vangava vanosemeswa nazvo. Kana uri munhu anosemeswa, gumira kubhinzi chete asi hwisisa kuti vamwe vakadzi vane bhinzi dziri SENSITIVE zvokuti havakwanisi kurega murume achikwizapo norurimi. Pakadai kwiza nyama dzakatenderedza bhinzi uye terera zvinorebwa nomukadzi
apa tiri kuti zvigwere pakati pevanhu vakatanga muchato wavo vasina zvigwere vakagara zvakanaka pasina kuhurirana hazvipo. Bhinzi haina chigwere zvachose. Chombo hachina chigwere kuchisveta.
Asi hepano pane dambudziko. Ukatarisa pakahi Zvigwere zvechihure unoona chigwere chinohi HPV chinova chazara nyika dzakaita se America ne Europe. Chigwere ichi chinoitisa CANCER dzakati wandei. Vanhu vakawanda vanacho mumiviri yavo. Iwe nomurume/mukadzi wako musati maroorana paya makaenda kunotesitwa mukaita COMPLETE SCREENING, mukaudzwa zvamuri. Madaro hapana umwe wenyu akazohura saka munoziva pamuri. Kana uchitya zvigwere panyaya yokunanzva nokusveta, zvinoreva kuti usarhojana nomunhu wako musina kondhomu nokuti kana ane chigwere anokupa pakusvetana kana kurhojana.
Usavata nomunhu wausingazivi HEALTH STATUS yake chero zvodii. Upenyu hwako noutano hwako huri mumaoko ako kwete emurume/mukadzi wako. Kana makaroorana potai muchinotesitwa, zvikuru kana muchimboparadzana. Potaiwa muchiudzana mafungire enyu panya dzokuhura kuti muhwisisane zvamuri kufunga. Kana usingagutswi noumwe wako haisi nyaya yokupopotedzana asi yokutaurirana murudo kuti adzidzewo kukugutsa.
Kusveta bhinzi yomukadzi
Kudya inhu yomurume
Posted by Mai E Chibwe at 08:08
maita basa nechidzidzo ichi. Ndanga ndisingazivi kuti vanhukadzi vanonakigwa kunanzviwa bhinzi zvakapfuurikidza kunakigwa nechombo. Maita chaizvo
18 January 2015 at 14:34
ko murume haazobudisiri mukanwa here
Murume nomukadzi wake munogarotaurirana zvamunofarira kuitana muri vaviri. Kune vanhu vashomashoma mupasi rese vanongoisana vasingadudzirani zvavanofarira nezvavasingafariri. Musi waunotanga kusveta chombo chomurume unoshamisika nokuoma kwacho chamira, zvichibva pakuti murume wako ari kunakigwa nazvo. Asi sezvawataura kana ari munhu uya anongoti kupinza nokutotunda ipapo, zvoreva kuti anokwanisa kukupa urume mumuromo. Asi kana ari murume anoda mukadzi wake, anohwisisa kuti zvinofanigwa kutora nguva, anononoka. Anofanirazve kukuudza kuti chirega kana akahwa kuti urume hwava pedo.
Kana uri munhu asingagoni kuudza murume kuti haudi zvokupiwa urume mumuromo, zvoreva kuti haudi zvokuita chinhu chine RISK saka wongomirira iye okuita zvaanoda kuita newe. Iwe zii.
Urume hauna chakaipa pahuri asi kungoti fungwa dzedu dzinoti hazvifaniri kuva nahwo mumuromo. Kana murume akaita akisidhendi akakuburitsira mumuromo. Ingosvipa pachitawero chaunogara nacho panguva yokuisana. Kana wada kunosuka mumuromo enda unosuka.
Wadzoka, udza murume kuti unoda chose kumusveta chombo asi haudi urume mumuromo. Zvadaro chimuvhurira muvatane uye usatsamwira murume.
Mapedza dzokera kunyaya umubvunze kuti kumusveta kunonaka here uye kunaka here kwamuitisa atunde. Kana mataurirana ngaahwisise kuti unoda mumusveta uye zvinokunakirawo asi kungoti urume bodo. Zvinokutyisa. Kune vakawanda kungosvetana pasina zvokupanana urume saka usatya hako.
Nhy ko mukadzi kana achiti ega anoona zvinyadzi kana mave mese anoti haadi kuzviona chii?
12 June 2016 at 06:38
Apa hauna kunatsotsanangura kuti muvunzo wako unorevei. Hapana anatsohwisisa.
21 June 2016 at 12:41
kana mukadzi achiita zvokungoteerera murume chete achimirizika kuita nyaya dzebonde zvingagadziriswe sei nokuti anenge akangoti kwindi kubva pakubvisa zvipfeko kana kupfakayika even panguva yokukwirana idhimoni here kana kuti chii tinozvishairwa pazvo panogadzirisika here apa kana kuti hameno
16 March 2017 at 02:04
Kuna vakadzi vakawanda chose munyika dzakaanda vanoona sokuti kuisana zvoreva kuti murume ndiye anoita zvese mukadzi anongovapo kuiswa chete chete iye asina zvaanobatsira ipapo. Nyaya iyi inoshungurudza varume vakawanda. Ndinonyoregwa kakawanda chose nevarume vane vakadzi vakadai.
Murume ane mukadzi asingafakanyiki pakuisana anofanira kutihwisisa kuti mukadzi haana kusununguka pakuisana kwenyu. Zvoreva kuti RELATIONSHIP yenyu haisiri yemurume nomukadzi asi yemuranda naishe wake. Saka murume anofanisa kusunungura mukadzi nokumupa mukana wekutaura zvaanodawo.
Chokutanga mukadzi akasafakanyika usaramba uchiita. Mira zvauri kuita womubvunza kuti pana chaasiri kuda here. Kana ati hapana womuudza kuti zviri kuita sokuti hausi kuzvifarira nokuti hausi kushanda. Kana zvanetsa akaramba achidaro womuudza kuti hazvikufadzi kuona achiita seasingadi saka zviri nani mumbotanga mahwisisana.
Kurudziramukadi kuti ambokwirawo pamusoro woti kana aripo iwe hauchashandi. rega iye ashande basa rese. Kana achisvoda momodzima marambhi moitira murima. Kana ukazoona chiuno choshandiswa, kurudzira kuti awedzere.
Ukaramba uchikurudzira uchirumbidza uchimupa manyawi, uye uchiti mapedza womuudza kuti kana achishandisa chiuno zvinonaka chose, uchazoona kuti anosununguka pazviri.
Zvii zvingaitwa kudzikisa marwadzo emusana pakuitabonde
3 August 2017 at 04:20
Vanhu vashomanana vanohwa kugwadza kwemusana zvichiitiswa nokuvatana. Kuvatana hakuwanzi kuitisa damudziko romusana saka kana musana uchigwadza pane zvimwe zvisinei nokuvatana zviri kuukonzera. Kuvatana kunongozowana dambudziko ratovapo zvreva kuti munhu ongofunga kuti ndizvo zviri kuitisa asi bodo.
Chiri nani ktarisa chikonzeo uye kuchigazirisa nokuti nyaya dzemusana dzinokwanisa kutowedzera kana dzikasatariswa nevarapi uye kunotogwa X_RAY kuonekwa kuti chii.
Kotizve vamwe vakaita nyaya ya ma KYDNEY zvinoita somusana saka unokwnisa kufunga kuti musana asi bodo.
Kuisana hakukonzeri kugwadza kwemusana kazhinji.
3 August 2017 at 05:11
mukomana wangu haadi kundinznzva kasi ini ndinomunanzva. Ndakamboedza kumutsanangurira kasi haa akanyatsoramba. Ndinozvishuwira zvisingaite zvekuti dzimwe nguva ndizvo zvinondiitisa kuti nditunde. Ndoita sei?
1 March 2018 at 01:23
ndakamboita yeast infection kaviri ndakaita treatment yacho yakapera. Kuti ndizive kuti ndaandinayo ndanga ndisisiri kutota and zvebonde zvanga zvavakugwadza. Ndaifunga kuti after treatment zvichadzokera pekare kuti ndigone kutota kasi hapana chirikuchinja. Ndodini kuti ndikwanise kutota zvekare ndiwane kunakirwa ini nemumwe wangu?
1 March 2018 at 01:25
Kazhinji chinoita kuti mukomana asada kukupa rurimi zasi inyaya yokutya. Kune varume vakawanda vanotya kuzasi kwemukadzi nengari yokuti tinoenda kumwedzi. Zvinotyisa varume vakawanda izvozvo. Zama kutsanangura kuti haasviki kunopinda chombo anongogumira pabhinzi chete chete.
Womutaridza kuti pakatosiyana bhinzi iri kwayo yega kwekupinza chombo kuri kwega saka kana magezerana anongoshandisa rurimi kubhinzi chete ogumira ipapo. Uyezve kuti hapana chinoitika pakunanzva bhinzi asi kungoti zvinonaka chose kupfuura kupinzwa chombo. Varume vakawandisa vanofarira bhinzi dzevakadzi vavo. Zvikuru kana bhinzi imire nezemo.
Imbozama Asizve iwewo muridzi wogeza bhinzi yako ne VINEGAR kamwe pavhiki kuti pasaita hwema hwe gweme.
Chigere che YEAST chinoitika kuvnhukadzi vakawanda chose iri nyaya yokuisana iyoyi, uye mapiritsi emimba, uye Diabetes, kana kumwa imwe mishonga.
Kana une YEAST INFECTION ndipo paunotowedzera kunyorova uye kubuda DISCHARGE yakachenuruka. Kugwadziwa pakuweta uye pakuisana nomurume. Inovava zvokuti unongoda kukwenya. Mukaisana inayo murume anoibatawo.
Kurapiwa kwazvo kana murapi ari pedo endai kunorapiwa. Kana ari kuri kungotora chibazi chimwe chete che GARLIC womenya kubvisa ganda, wocheka nepakati zvoita zvihafu zviviri woisa mukati. Zvinogadza kwehafu ye awa asi ukasiya zviri mukati mangwana acho hauchavaviwi
Kusanyorova pakuisa zemo kunoda kuti ushandise KY jelly inowanikwa kuCHEMIST. kungoizora yakawanda pachombo chomurume kana oda kupinza. Zvinoita nani.
1 March 2018 at 07:12
Zvinotendwa izvi,ko hamuna kuzotipazve book racho titsvagewo tigovdrengawo zvakawanda
18 May 2018 at 06:07
Mabhuku azvo haaperi mazuvano. UkangoGUGULA unotomawana akawanda chose wongotenga raunoda kutenga. Asi hwisisa kuti kana uri muZimbabwe ukangotenga bhuku rine zvokuvatana ukabatwa unosungwa. Hurumende yedu haifariri kuti tigadzirise nyaya dzomudzimba.